Ciidamada Ammaanka Puntland oo sargaal sare oo katirsan Al-Shabaab ku qabtay gudaha magaalada Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCiidamada Ammaanka Puntland oo sargaal sare oo katirsan Al-Shabaab ku qabtay gudaha magaalada Gaalkacyo
July 25, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Cabdirisaaq Xuseen Tahliil sidoo kale loo yaqaan (Ina Caloolgeel). [Sawirka: Archive]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Ciidamada Ammaanka Puntland ayaa qabtay Cabdirisaaq Xuseen Tahliil sidoo kale loo yaqaan (Ina Caloolgeel), waxaana lagu qabtay howlgal ay si wadajir ah u sameeyeen Puntland iyo Galmudug oo ka dhacay qaybta koonfureed ee Gaalkacyo horaantii asbuucaan, sida ay ku warantay idaacada Radio Daljir oo soo xiganaysa ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah.
Waxa uu Al-Shabaab u qaabilsanyahay dhanka saadka ee Puntland, sida ay ilo-wareedku sheegeen.
Intii uu howlgalku socday, ciidamada PSF ayaa sidoo kale qabtay saddex qof oo kale oo lala xiriirinayo ururka hubaysan ee Al-Shabaab.
Sanadkii 2012, Ina Caloolgeel ayaa waxaa gudaha Gaalkacyo ku qabtay ciidamada Puntland, balse waxaa la sii daayay sanadkii 2014, kadib markii Madaxweynaha hadda talada haya uu amray in la sii daayo isaga.
Gaalkacyo waxaa dhibbaato kasoo gaartay tiro weeraro ah oo ay u geysteen Al-Shabaab, oo uu kamidyahay kii Agoosto 2016 lala beegsaday dowladda hoose ee Gaalkacyo kaasoo lagu dilay ugu yaraan 30 qof.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah dib ugu doortay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Shiikh Cumaan sidoo kale looyaqaan (Jawaari). Jawaari ayaa helay 141 cod, halka ninkii la loolamayay Cabdirashiid Maxamed Xidig [...]